Jordania: Mibanjina anao i Big Brother! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2010 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny polski, македонски, Français, Italiano, Español, English
Nifoha tampoka ny vondron'olona Jordaniana mpampiasa aterineto rehefa nipotra ireo vaovao mikasika ny fanasaziana an'Imad Al-Ash an-tranomaizina mandritra ny roa taona – noho ny faniratsirany ny mpanjaka Jordaniana tao anatina hafatra enoho eo (IM) nalefany tamin'ny namany iray. Ity mpianatra ho manampahaizana mikasika ny solosaina ity dia notànana ary nampijaliana nandritra ny dimy volana talohan'ny fijeren'ny fitsarana ny momba azy. Manana ny ambarany ireo Jordaniana mpitoraka blaogy eto.
Naseem Al Tarawnah dia niteny fa “mampidi-doza ity fampiangana ity ka tsy azo atao na dia ny hihomehy azy” aza .
Voalohany, ny zava-misy amin'ny efa maha-taonjato faha 21 izao sy mbola anenjehana foana ny Jordaniana ho manao faniratsirana mpanjaka – lalàna tena efa lany andro izay mampametra-panontaniana ny amin'ny antony mbola manosika ny firenena hampiasa azy ity sady milaza fa mandeha mankamin'ny fivoarana – dia tena tsy takatro intsony. Raha amin'ny zavatra rehetra, io dia iray amin'ireo lalàna noporofoin'ny tantara eran-tany fa tsy misy ilàna azy sy tsy mandaitra Tsy mahasakana ny vahoaka tsy haniratsira mpitondra firenena izany, raha ny marina aza dia mamporisika ny mpanakiana hanao bebe kokoa (toy ny tranga hita tany Maraoka tato anatin'ny andro vitsivitsy), ny mifanohitra amin'izany aza, io dia manamafy ny fiheverana fa miaina ao anaty fanjakana tsy refesi-mandidy ny olona.
Manohy i Al Tarawnah:
Faharoan'izay, ny Fitsaram-panjakana manenjika mpianatry ny anjerimanontolo noho ny zavatra nambàrany tanay anafy efitry ny tsaty? Tsy vitan'ny hoe mikiky ny lanjan'ity andrim-panjakana ity fotsiny sy manimba ny fitokisana omena azy izany fa ankoatr'izay ity fitsarana ity izay nanenjika ny olona noho ny resaka famadihana dia tsy tokony hanasazy vahoaka noho ny fanakianana miaro faniratsirana ataon'izy ireny.
Manamarika izy aoriandriana kely fa:
Fahatelo, akisako kely ny zava-misy, resaka momba ny fanarahamaso ataon'ny mukhabarat (sampam-pitsikilovana) amin'ny MSN Messenger ary misaotra an'Andriamanitra fa tsy dia olona mpitsaty be loatra izany aho.
Al Tarawnah mamarana:
Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia tsy horaisina ho toy ny fanomezan-kevitra na ho toy ny fihetsika famporisihana ireo Jordaniana, enga anie Andriamanitra, haniratsira ny mpanjaka. Manarak'izany, tsy mihevitra mihitsy aho ny tsirairay dia tokony hifaniratsira ho fanombohana azy. Saingy averina indray, tsy mihevitra aho fa hoe ny tsirairay dia ‘ndeha ho sazian'ny Fitsarana roa taona an-tranomaizina noho ny fanaovany izany.
Angamba ny tena zava-doza mety havoakan'ity tranga ity dia ny toa hanamafisan'izy ity ny hevitra noraisin'ireo sasantsasany ao anivon'ny fitondrana nanosika ny famerana ny fahalalaham-pitenenana eo anivon'ny aterineto.
Haingana tokoa tamin'ny fitondrana fanamarihana momba ity tranga ity sy ny mety ho vokany ireo mpamaky.
Tezitra i Farah fa hatramin'ny IM manokan'ny tena avy no araha-maso, ka hoy izy:
Tena maharangitra ahy mafy tokoa izany. Ilaina ny tokony hisian'ny olona avy ao amin'ny governemanta hanome fanazavana. Ahoana no ahasahian-dry zareo? Inona ity 1984?
Tena mahasorena be. Heveriko fa tokony hanao fanambaràna, hanazavana izay tena zava-mitranga ry zareo manampahefana. Satria raha tena niainga tokoa avt tamin'izay resaka tanaty tsaty ny fanasaziana! Andriamanitra anie hanampy antsika rehetra ary Andriamanitra hanozona izay tomponandraikitra tamin'ilay fisamborana.
Ary Reem dia milaza fa ny vaovao toy izany dia mahatonga azy ho tsara aro amin'ny fandefasana ny ao an'eritreriny aty ivelan'ny aterineto. Hoy izy manamarika:
Ny vaovao toy izany dia mahatonga ahy hahatsapa fa tsara aro kokoa aho maneho ny hevitro anivona vondrona voafetra any ivelany noho ny ao anatin'y aterineto. Tsy hoe satri aho manana eritreritra mandeha amin'ny lalana mifanipaka, fa satria tsy haiko mihitsy hoe aiza hatraiza no fetra ary lalàna toy inona no hiaro ahy. Ao Jordana dia toa hita ho miasa tsara ho an'ny governamanta ihany ny teknolojia mba hanamafy ny lalàn'ity farany izay efa tany amin'ny taonjato faha 18 fa tsy ho an'ireo olona te-hiroso.
Na izany aza, tsy gaga i Monty:
Na dia tsy tokony ho gaga aza aho…na io ny mailakao, ny blaoginao, ny kaontinao ao amin'ny facebook, ny findainao, ny bitsikao (tweets), MSN, skype na zavatra hafa koa ataonao amin'ny aterineto, tena azoko antoka fa voatahiry any ambadimbadika any daholo ireny ary atsinkafona rehefa misy gaigy mihevitra anao ho nandika ny fetra. Ho an'ireo sasany amintsika izay tena mavitrika tokoa amin'ny aterineto, midika izany fa afaka mahafantatra ny zavatra betsaka momba anao tsara mihitsy ry zalahy.
Ny tena mahazendana ahy dia ny zava-misy hoe ankehitriny ry zareo dia manana ny fahafaha-mnao sy ny fitaovana hijerena izay resatsika amin'ny tsaty… sahala amin'ny maneranan ny tany, ny fivoaran'ny IT (Teknolojian'ny Informatika) izay nanomboka niaraka tamin'ireo asam-piarovana.
Ary i Thamer kosa mikaroka valiny momba ny hoe ahoana no ahafahana manara-maso ireo tsaty:
Indrisy, tena dia mianoatra goavana be ataon'ny firenena ity. Misy mahalala ve hoe ilay olona resahana anie ka eo ambany fanaraha-maso tokoa ( tsy azo antoka loatra ara-teknika raha ny hoe azo araha-maso avy ato anatiny ny tsaty MSN) na raha nisy olona nitoroka azy tany amin'ny fanjakana fa hoe naniratsira ny mpanjaka izy? Te hino aho fa raha ni-tsaty tamin'ny MSN izy tao anatina vondrona tsaty iray ka nisy tao manampahefana iray mpitsikilo nisora-tena ho olon-tsotra na mpanome vaovao nandray anjara tamin'ilay tsaty dia mety ho iray amin'ireny no nanaitra ny manampahefana. Raha tsy izany, antenaiko fa hisy olona manana fahalalalana ara-teknika mba hitondra fanazavana misimisy kokoa ho antsika momba an'io!
Ireo mpamaky hafa kosa niditra ka nanamafy fa nosamborina i Al-Ash noho ny nanoratany tsikera tao amina tranonkala Jihadi iray, fa tsy noho ny faniratsirana ny Mpanjakan'i Jornania tamin'ny hafatra tanaty Messenger.